Nepal Drishya हामी आयौँ !
Nepal Drishya २७ साउन, २०७८ | 11 Aug, 2021
आजको यूग, डिजिटल जमानाको पत्रकारिता । त्यसैले नेपाली मिडिया जगतमा आजदेखि हामी पनि डिजिटल जमानाको पत्रकारितासहित तपाईंहरु माझ आएका छौं । फरक शैली र प्रस्तुतिसहित नेपाल दृश्य आम पाठक, स्रोता र दर्शकबीच आएको छ । हामी किन आयौं ? भिडियो सम्पादकीयमार्फत हाम्रो उद्देश्य के हो ? भनेर तपाईंलाई जानकारी गराउँदैछौं ।
हामी परम्परागत ढाँचाको र सहज होइन, नयाँ मानकसहित जीवन्त पत्रकारितको अभ्यास गर्ने योजनामा छौं । विश्वको बद्लिदो मिडिया ट्रेन्डअनुसार नेपाल दृश्यले तपाईंहरुको चाहनाअनुसार नै मल्टिमिडिया प्लेटफर्मको रुपमा काम गर्नेछ । अझ भनौँ–रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको वैकल्पिक मिडियाका रुपमा हामी मूलत : ‘भिडियो न्यूज पोर्टल’ को रुपमा आम पाठक, स्रोता र दर्शकसँगै हुनेछौं ।
यसको मतलब यो होइन कि हामी शब्दमा काम गर्देनौं । यस प्लेटर्फममा हामी करिब ८० प्रतिशन भिडियोमा र २० प्रतिशत शब्दमा काम गर्नेछौं । हामी शब्द र भिडियोमा पुलको भूमिकामा रहेर काम गर्ने छौं, निकट भविष्यमै तपाईंले यसको मुल्यांकन गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंहरुको हात–हातमा रहेका स्मार्ट फोनमा हामी धेरैभन्दा धेरै देखिनेछौं । सबै उमेर समूह तथा पेशा–व्यावसायका व्यक्तिका लागि हामी साथी बन्नेछौं।
समाचार, विचार र विश्लेषण पस्कने हाम्रो शैलीपछि नेपाल दृश्यले उठान गर्ने विषयवस्तुबारे यहाँहरुलाई अवगत गराउँ । हाम्रो ‘भिडियो न्यूज पोर्टल’ मा यहाँहरुले राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रसम्म, इतिहासदेखि भविष्यसम्म, स्वास्थ्य–शिक्षादेखि पर्यटनसम्म अनि खेलदेखि मनोरञ्जनसम्मका विषयवस्तु पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । तपाईंले हाम्रो पोर्टलमा आएर समाचार साम्रगीदेखि डकुमेन्ट्री र फिल्मसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ । अर्थात नेपाल दृश्यमा देखिने छ, देशको सम्पूर्ण दृश्य ।
नयाँ प्रयोगको पत्रकारिता गरिरहँदा हामी स्थापित मुल्य–मान्यताहरुबाट मुक्त हुने छैनौं । पत्रकारिताका सिद्धान्त आत्मसाथ गर्नेछौं । तर, सत्य, न्याय, राष्ट्रियता र जनजीवीकाका प्रश्नमा हाम्रो निष्ठा कतै पनि कमजोर हुनेछैन । हामी आम पाठक,स्रोता र दर्शकको पक्षमा उभिनेछौं र सम्झौताहीन पत्रकारितालाई जोड दिनेछौं। हामी तपाईंको रचनात्मक सुझाब सल्लाहको अपेक्षा गर्दछौं ।
हामी किन आयौं ?
Published Date: २७ साउन, २०७८ | 11 Aug, 2021